श्रव्य द्वारा तपाइँको मनपर्ने मार्केटिंग पुस्तकहरु साझा गर्नुहोस् Martech Zone
बिहीबार, मे 26, 2016 मङ्गलबार, जुन 7, 2016 Douglas Karr
यो एक समय भएको छ जबदेखि म एक श्रव्य ग्राहक हुँ तर मैले भर्खरै ब्याक अप सुरु गरें। श्रव्य सामग्री मा अग्रणी अडियोबुक प्रकाशकहरु, प्रसारकहरु, मनोरन्जनकर्ताहरु, म्यागजिन र समाचार पत्र प्रकाशकहरु, र व्यापार जानकारी प्रदायकहरु बाट 250,000 भन्दा बढी अडियो कार्यक्रम सामिल छन्। श्रव्य पनि एप्पलको आईट्यून्स स्टोरका लागि स्पोकन-वर्ड अडियो उत्पादनहरूको प्रदायक प्रदायक हो।
मसँग अझ धेरै समय छ सुन्न किताबहरुमा जब म ड्राइभ गर्दै छु वा काम गर्दैछु तिनीहरूलाई पढ्न समय लिनु भन्दा। म अझै धेरै पुस्तकहरू पढ्छु, तर मेरो शिक्षाको लागि र मेरो साथीहरूको भर्खरको पुस्तकहरूमा राख्नको लागि मेरो उत्पादकता जब मैले पुस्तकहरू सुन्न थाले भने धेरै वृद्धि भयो।
तपाईंको नि: शुल्क -०-दिन श्रव्य परीक्षणको लागि साइन अप गर्नुहोस्
तपाईंको अडियोबुक खरिद गर्न मोबाईल मार्फत एकदम सजिलो छ। डाउनलोड गर्नुहोस् अयोग्य अनुप्रयोगहरू। तपाईं या त प्लेटफर्म भित्र अडियो पुस्तकहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईं दुबै श्रव्य साइट वा अमेजन दुवैमा तपाईंको अमेजन लगइन प्रयोग गरेर खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरूको खोजी एकदम बलियो छ, तपाईं कोटिबाट ब्राउज गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, बिक्री अनुसार क्रमबद्ध, प्रासंगिकता, वा रिलीज मिति, संक्षिप्त संस्करणहरू खोज्नुहोस्, र अन्य विकल्पहरूको एक टन।
एक पटक तपाईं खरीद गर्नुभयो, श्रव्य अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र तपाईंको अडियोबुक डाउनलोड हुनेछ। तपाईं त्यसपछि अडियोबुक सुन्न सक्नुहुन्छ। मलाई वास्तवमै मनपर्ने सुविधाहरूमध्ये एउटा यो हो कि म अडियोबुकमा निर्धारण गरिएको गति बढाउन सक्दछु, मलाई द्रुत क्लिपमा पुस्तक सुन्न अनुमति दिँदै।
श्रव्य सामाजिक हुन्छ
श्रव्य हालसालै प्रस्तुत गरियो तत्काल पुस्तक सिफारिशहरू। यो नयाँ सुविधाले श्रोताहरूलाई उनीहरूको लाइब्रेरीमा स्वामित्व भएको कुनै पनि अडियोबुक अरूको लागि तत्काल ईमेल, पाठ, फेसबुक मेसेन्जर वा व्हाट्सएप मार्फत उनीहरूको आईओएस, एन्ड्रोइड र विन्डोज १० उपकरणहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। प्रत्येक प्राप्तकर्ताले उनीहरूको पहिलो शीर्षक नि: शुल्क कार्यक्रमको माध्यमबाट प्राप्त गर्दछ, र श्रव्य लेखक, अभिनेता र अन्य अधिकार धारकहरूलाई प्रत्येक प्राप्तकर्ताको पहिलो शीर्षकको बराबर मान तिर्नेछ!
सुविधा प्रयोग गर्न सजिलो छ। केवल ट्याप गर्नुहोस् यो पुस्तक पठाउनुहोस् तपाईंको लाइब्रेरीमा आइकन, र तपाईंले सिफारिस गर्नुभएको अडियोबुक नि: शुल्क हुनेछ यदि यो तपाईंको सुविधा प्राप्तकर्ताको पहिलो पटक हो जुन यस सुविधा मार्फत अडियोबुक स्वीकार गर्दछ।
कत्ति राम्रो छ कि यदि तपाईं यस्तो किताबको लेखक हुनुहुन्छ जुन श्रव्य स्वरूपमा जारी भयो? तपाईंको पुस्तक पाठकहरूको हातमा हाल्ने कस्तो उत्तम तरिका!
प्रकटीकरण: यो प्रायोजित कुराकानी मबाट श्रब्यको तर्फबाट लेखिएको हो। विचार र पाठ सबै मेरा हुन्।
टैग: श्रव्यअडियोबक्समार्केटिंग पुस्तकहरु
जोडदार: आउटसोर्स सोशल मीडिया राम्रो भयो